इटहरीकी सालु सरदार जसले खाली भूइँमै छोरो जन्माइन् ….. – ईमेची डटकम
इटहरीकी सालु सरदार जसले खाली भूइँमै छोरो जन्माइन् …..
Posted byईमेची डेक्स July 2, 2019 October 24, 2019 Leaveacomment on इटहरीकी सालु सरदार जसले खाली भूइँमै छोरो जन्माइन् …..
विराटनगर / सोमबार बिहान ६ बजेको थियो । विराटनगर बसपार्कमा एक महिला छटपटाइरहेकी थिइन् । प्रसव पीडाले छटपटाइरहेकी उनी थिइन् सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–७ गैसारकी ३५ वर्षीय सालु सरदार । उनी गर्भवती थिइन् । बच्चा जन्मिएका बेला आवश्यक पर्ने कपडा किन्न भारतको जोगवनी बजार जाने क्रममा विराटनगर बसपार्क आइपुगेपछि उनलाई प्रसव पीडाले च्यापेको हो । त्यही क्रममा उनले छोरा जन्माइन् । महिलाले खाली भूइँमै शिशु जन्माएको कुरा सुनेपछि स्थानीय बासिन्दा भेला जम्मा हुन थाले । केहीले तन्ना दिएर सहयोग गरे । केहीले चाउचाउको रस बनाएर खुवाए ।
सालुलाई नवजात शिशुसहित विराटनगर–११ जनपथकी सन्तोषी श्रेष्ठले प्रहरीसँग समन्वय गर्दै आफ्नो बा १६ च ३६७९ नम्बरको कारमा राखेर बिहान ६ बजे उद्धार गर्दै उपचारका लागि कोसी अस्पताल पु¥याइन् । प्रसव पीडाले छटपटाइरहेकी महिला सडकमै सुत्केरी भएपछि उद्धार गरेर अस्पताल पु¥याइएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सडकमै बच्चा जन्माएकी सालु सलबार बायाँ ।
सडकमै बच्चा जन्माउने सालुका पहिलो सन्तान १२ वर्षका छोरा छन् । दुई महिना अघि श्रीमान ४० वर्षीय राजकुमारको अचानक मृत्यु भएपछि घरमा छोरा र गर्भवती अवस्थाकी उनी मात्रै थिए । पारिवारिक आर्थिक अवस्था एकदमनै कमजोर रहेको र श्रीमानको पनि मृत्यु भएपछि थप समस्यामा परेको सालुले बताइन् । उनले गर्भवती भएपछि अहिलेसम्म चेकजाँचका लागि कुनै पनि अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था नगएको बताइन् । मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी विश्व अधिकारीले खुला ठाउँमा महिला सुत्केरी भएको सूचना प्राप्त भएपछि स्थानीयसँग समन्वय गर्दै सुत्केरी अवस्थाकी महिला र नवजात शिशुलाई उद्धारमा प्रहरीले पनि सहयोग गरेको बताए ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी विष्णुबहादुर बुढाथोकीले सुत्केरी आमा र नवजात शिशु दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताए । उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई उद्रित गर्दै उहाँले शिशुको तौल २ दशमलव ७ किलोग्राम रहेको जानकारी दिए । बुढाथोकीले सामान्य तरिकाले बच्चा जन्मिएको भए पनि २४ घण्टासम्म चिकित्सककै निगरानी आमा र बच्चालाई राखिने बताए । उनले अझै पनि धेरै जसो महिलामा गर्भवती भएका बेला नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल जानु पर्छ र स्वास्थ्य संस्थामै बच्चा जन्माउनु पर्छ भन्ने ज्ञानको भने अभाव रहेको बताए ।
Posted byईमेची डेक्स July 2, 2019 October 24, 2019 Posted inब्यानर न्यूज
२ दिन देखि हराइरहेका १२ बर्षीय सबिन मृ*त भेटिए, आमा बेहोस परिवारमा रुवाबासी !
एसइई पश्चात खुलेकी करिश्माले गरिन् फोटो सुट ! हेर्नुहोस करिश्मालाई ६ तस्बिरमा